> Electronics>Coffee Maker>DeLonghi Magnifica S ECAM 22.360.S Coffee Machine
Reference ECAM 22.360.S
Just select yourperfect cappuccino at the touch ofabutton. Equipped witha2 text lines display with the possibility to customize your coffee as you prefer, cupholderand waterfilter. Make your life and your family's life more happier and easier with best coffee everyday.
* Made in Italy*2years service warranty
ကော်ဖီ နှစ်သက်သူတို့၏ ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် De'Longhi မှ ထုတ်လုပ်သော ကော်ဖီစက်များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါသည်။ De'Longhi ၏ ECAM 22.360 ကော်ဖီစက်သည်ကော်ဖီစေ့မှကော်ဖီခွက်သို့တိုက်ရိုက်ရရှိစေပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် အကောင်းဆုံးကော်ဖီတစ်ခွက်ကို လွယ်ကူစွာရရှိစေနိုင်ပါသည်။ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ်တဲ့ LCD မျက်နှင်ပြင်ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူနိုင်ပါသည်။ အလွယ်တကူ ဖြုတ်၍ သန်ရရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အချိန်ကုန်သက်သာ လူမပင်ပန်းဘဲနေ့စဉ်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံးကော်ဖီများသောက်သုံးရင်း ပိုမိုစိတ်ချမ်းေ့မြ့ပျော်ရွင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။အီတလီနိုင်ငံထုတ်စက်ဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှု (၂)နှစ် အာမခံထားပါသည်။